तिथि मेरो पत्रु » डेटिङ र वैवाहिक सल्लाह – आकर्षण को कानून
द्वारा अनि Baritchi
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 01 2020 |3मिनेट पढ्न
त्यसैले आकर्षण को व्यवस्था के हो? बस यो हामी हाम्रो जीवन हामी हाम्रो ध्यान केन्द्रित कुराहरू मा आकर्षित गर्नेछ भन्छन् कि सार्वभौमिक कानून राखे, यो सकारात्मक वा नकारात्मक छ कि. तपाईं यो वा छैन थाह होस्, हरेक तपाईं लाग्यो, तपाईं महसुस हरेक भावना, तपाईं सुन्न र पढ्न सबै, आफ्नो वास्तविकता असर.
त्यसैले के भन्ने डेटिङ र सम्बन्धबारे गर्न पाउँछ?
साँच्चै तपाईं सम्बन्ध देखि चाहनुहुन्छ के बुझ्न र आकर्षण सिद्धान्तहरू केही धेरै आधारभूत व्यवस्था लागू गरेर, तपाईं तपाईं साँच्चै इच्छा के प्राप्त सुनिश्चित गर्नेछ. यो ठीक कुन भौतिक झुकाउ बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, व्यवहार, मान, विश्वास, के तपाईं सट्टा तपाईं चाहँदैनन् के को आफ्नो सम्बन्ध मा के चाहन्छौं ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् भनेर र गतिविधिलाई तपाईं महत्त्वपूर्ण.
सम्झना, तपाईं ध्यान केन्द्रित के तपाईं प्राप्त हुनेछ.
थुप्रै पटक, आफ्नो सम्बन्ध असफल राख्नुका वा कसरी मानिसहरूलाई पाठका कुनै पनि विचार नदिई अर्को एक असफल सम्बन्ध जानेछन्. राम्रो पनि, तिनीहरूले सही र र यस्तै लागि असफल अर्को सम्बन्ध मा अन्त, अझै विपरीत चरम कारण.
“तपाईं हुनुहुन्छ भने म थियो जस्तै, के तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ के कुनै विचार छ
आफ्नो अर्को सम्बन्ध देखि ñ मात्र यो पूर्णतया विभिन्न हुनुपर्छ
यति बुरी असफल अन्तिम एक!”
म पक्कै म बस समाप्त सम्बन्ध देखि कम्तीमा एन चाहँदैनथे के थाह. म एक सम्बन्धमा असफल सम्बन्ध सबै सोच्न समय लिएको र संयुक्त सबै पीडा म के को एक स्पष्ट विचार मा र चाहँदैनथे थियो भने यो ठूलो भएको होइन होला? म पेंडुलम को केही झूलों मुक्ति सक्थे.
म कसरी 'आकर्षित गर्छन्’ मेरो लागि सही सम्बन्ध?
म तपाईं को लागि देख रहे कि सटीक व्यक्ति आकर्षित गर्न एक वास्तविक छिटो र सरल तरिका देखाउन लागिरहेको छु – तपाईंको सपना मिति!
कागज को टुक्रा बाहिर लिनुहोस् र आफ्नो सिद्ध सम्बन्ध मा तपाईं चाहनुहुन्छ सबै लेख्न. के उहाँ या त्यो मन? तिनीहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ, बास्ना, भाषण? कुरा कस्तो किसिमको सँगै गर्नुहुनेछ? तपाईं वरपरका छौं जब तपाईं लाग्छ कसरी? वास्तवमा यो मा प्राप्त र हरेक विस्तार लेख्न समय लिन. यो अन्त मा यो राम्रो तरिकाले लायक हुनेछु.
सबैभन्दा मानिसहरू चाहनुहुन्छ कापीमा लेख्ने यस कदम कहिल्यै र अझै पनि यसलाई आफ्नो सपना को साथी भेट्टाउनु मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो.
“तपाईं बस तल लेखेर तपाईं के चाहनुहुन्छ भनेर थाह छ, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्ने संभावना वृद्धि 80%!”
बस एक मिनेट को लागि भनेर सोच्न…
आफैलाई शङ्का नगर्नुहोस्. तपाईं हरेक तरिकामा सिद्ध छन् र केही गणनामा तपाईं चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै के रही आफ्नो बाटो मा छ भन्ने अनुमान. मुद्रा छैन, वा लग, वा समय, वा अरू कुनै.
“तपाईं चाहनुहुन्छ कि केहि गर्न सक्छन् ImagineÖ!”
तपाईं यस व्यायाम समाप्त गरेको छ जब, तपाईं खेल को राम्रो तरिकाले अगाडी हुनेछ. लामो समय को रूप मा तपाईं को आवश्यकता लिनुहोस्… यो आफ्नो अन्तिम सफलता महत्वपूर्ण छ!
तपाईं चाहनुहुन्छ के तपाईंको मनमा धेरै स्पष्ट हुनुहोस्. अन्यथा, ब्रह्मांड तपाईं साँच्चै एन चाहनुहुन्छ कुनै विचार हुनेछ र यो तपाईंलाई दिनेछु के हो. (बस एक द्रुत नोट, म 'ब्रह्माण्ड' भन्न जब, म परमेश्वरको अर्थ, बुद्ध, आमा धरती, या जो तपाईं आफ्नो विश्वव्यापी उच्च शक्ति लागि प्रयोग अवधि।)
दुबिधा? एक रेस्टुराँमा जा र ह्यामबर्गर आदेश कल्पना गर्नुहोस् hereÖ मलाई रहनुहोस्. यस वेटर आफ्नो क्रम मा उत्तेजित गर्दछ. आफ्नो hamburger आइपुग्छ अघि, तपाईं आफ्नो आदेश परिवर्तन. अब तपाईं साँच्चै एक स्टेक चाहनुहुन्छ कि वेटर बताउन. यस वेटर आफ्नो क्रम मा उत्तेजित गर्दछ. आफ्नो स्टेक आइपुग्छ अघि, के तपाईं फेरि आफ्नो मन परिवर्तन गरेको भन्ने वेटर बताउन र एक सलाद चाहन्छु. अब यस बिंदु मा, सबै भन्दा वेटर को सलाद आफैलाई बनाउन तपाईंले बताउनेछन्. ब्रह्माण्ड त्यसो हुनेछ, तर तपाईंले ब्रह्माण्डका तपाईं पनि थाहा छैन जब तपाईं चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै के तपाईं दिन को लागि यो धेरै गाह्रो छ कसरी देख्न सक्छौं?
ठीक एन समाप्त?
तपाईं यो गरेन भने फिर्ता जाने र यसले के ñ. म यस सरल हुनेछ भन्नुभयो, तर तपाईं अझै पनि काम एउटा सानो गर्न छ.
अब तपाईं साँच्चै एक साथी मा इच्छा के बारेमा धेरै स्पष्ट छौं कि, कागज को भनेर टुकडा ले, यो हुन्थ्यो र कम से कम एक हप्ता को लागि तपाईं संग बोक्न. आफ्नो खल्ती यो बिताउनुहोस्, आफ्नो वालेट वा थैली मा, वा आफ्नो अंडरवियर मा. तपाईं यो राखे जहाँ यो कुरा गर्दैन, लामो समय को रूप तपाईं कम से कम एक हप्ता को लागि तपाईं संग यो राखन. तपाईं के तपाईं संग कागज को यस टुक्रा नबिर्सौं हरेक समय, आफ्नो साथी संग हुन यो कस्तो हुनेछ भावना सम्झना. वास्तवमा यो महसुस!
एक अधिक धेरै महत्त्वपूर्ण कदम हो. यस हप्ता, तपाईं आफ्नो पेट सुन्न भनेर पक्का, वा भित्री आवाज. यो तपाईं सामान्य बिहिबार जाने मङ्गलबार सुक्खा क्लीनर मा रोक्न तपाईं बताउँछ भने, मङ्गलबार जाने! आफ्नो लाइन मा खडा गर्दा तपाईं प्राण जोडीलाई भेट्न सक्छन्. यहाँ मुद्दा तपाईंले ब्रह्माण्डका आफ्नो अर्डर गर्नुभएको छ, अब तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो तरिका र व्यवहारमा पठाए भइरहेका संकेत ध्यान आवश्यकता!
शीर्ष4तपाईं डेटिङ थाह पाउनुपर्ने सुझाव
4 एक पहिलो तारीख लागि सुझाव
यस "सही समय" नयाँ सम्बन्ध अनुसरण गर्ने हुँदा?
कसरी तिथि लागि – पुरानो स्कूल शैली
कुकुर प्रेम गर्नै पर्छ